ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: ဆရာမင်းကျော်ဇော် သင်ကြားပို့ချသော "သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်း ဗေဒင်ပညာ"
ဆရာမင်းကျော်ဇော် သင်ကြားပို့ချသော "သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်း ဗေဒင်ပညာ"
သစ္စာခံ ဆန်းကျမ်း ဗေဒင်ပညာ သင်တန်းမူ
ဤလျှို့ဝှက်ရှားပါးသော ဗေဒင်ပညာကို သင်ကြားတတ်မြောက်၍ ဆရာတစ်ဆူအဖြစ် အောင်မြင်ကျော်ကြား လိုသူ ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် ရှေးအစဉ်အလာ စည်းကမ်းအတိုင်း အောက်ပါသစ္စာကို ဘုရားရှေ့မှောက်၌ ဆိုရမည်။ ဤသို့ ခံယူသော သူများသာလျှင် လျှင်မြန်စွာ တတ်ကျွမ်းပေါက်မြောက်စေသည့် ဥာဏ်အလင်းရောင်ကို ရရှိစေနိုင်သည်။ နှုတ်အာဏာစက် ထက်မြက်ထင်ရှားလာ၍ အဟောတို့သည် တိကျမှန်ကန်လာသည်။ ဓါတ်ယတြာများ ပြုပြင်စီမံပေးသော အခါ ဓါတ်ထိခိုက်သဖြင့် လိုရှိရာ အောင်မြင်ပြီးမြောက်စေနိုင်သည်။
သစ္စာဆိုရန် . . .
ဘုရားရှေ့မှောက်၌ ဆီမီးရေချမ်းတို့ ကပ်လှူပူဇော်ပြီး ငါးပါးသီလ ခံယူ ဆောက်တည်ရမည်။ မေတ္တာပို့ အမျှဝေပြီးသည့်နောက် . . .
၁။ ကျွန်တော်သည်/ကျွန်မသည် ဤနေ့မှစ၍ ဆီမီးရေချမ်းတို့ ကပ်လှူပူဇော်ပြီး နွားသား၊ ကျွဲသားကို သိလျှက်နှင့် မစားပါ။
၂။ သေရည် သေရက်တို့ကို ဆေးဝါးအဖြစ်တောင်မှ လိမ်းကျံခြင်း သောက်စားခြင်း မပြုပါ။
၃။ သူများ လင်ရှိမယား၊ မယားရှိလင် တို့ကို ကိုယ်ထိ ကာယ ကျူးလွန်စော်ကားခြင်း မပြုပါ။
၄။ ဤဗေဒင်ပညာကို အထင်သေးဖွယ်ရာ ဟောပြောခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
၅။ ဤဗေဒင်ပညာမှ အပဖြစ်သော အခြင်းအရာတို့ကို မုသားပြောဆို ဟောပြောခြင်း မပြုလုပ်ပါ။ (စိတ်ကူးဖြင့် ကြံစည်ဟောပြောခြင်း)
ဤသစ္စာ ကျိုးပေါက်ခဲ့ပါက လောကီပညာရပ်များကို လိုက်စားအားထုတ်ရာ၌ မပေါက်မြောက်ပဲ ပျက်စီးရပါစေသား။
ဤသစ္စာမှန်ကန်ခဲ့သည်ရှိသော် (ကျွန်တော်သည်/ ကျွန်မသည်) သတ္တ၀ါ အပေါင်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကူညီစောင့်ရှောက်နိုင်သော အောင်မြင်ကျော်ကြားသည့် ဆရာတစ်ဆူဖြစ်သည့်အပြင် ပီယသဒ္ဓိ၊ ဥာဏသိဒ္ဓိ စသော သိဒ္ဓိအပေါင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံရပါစေသား အရှင်ဘုရား . . .
အထက်ပါသစ္စာကို ခံယူခြင်း ပြုရမည့်အပြင် ဗေဒင်ပညာဖြင့် ဆရာတစ်ဆူ ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီးသူများ ဖြစ်ပါက နေ့စဉ် ရတနာသုံးပါးကို ဦးထိပ်ထား၍ နံနက်တိုင်း သီလဆောက်တည်ခြင်း၊ သမ္မာဒေ၀ နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတို့အား မေတ္တာပို့၍ နိမိတ်များ တောင်းခံခြင်းတို့ကို ပြုရမည်။
တတ်နိုင်လျှင် “အရဟံ သုဂတော ဘဂ၀ါ” တည်းဟူသော ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်ကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ပုတီး (၉)ပါတ် စိပ်ရမည်။ ဘုရားရှေ့မှောက်မှလွဲ၍ ဗေဒင်ဟောပြောခြင်း၊ ဓါတ်ယတြာပေးခြင်း မပြုပါနှင့်။ ဤအချက်ကြီးများသည် ဗေဒင်ပညာကို လေးစားမြတ်နိုးကြသော သမားအစဉ်အလာ ကောင်းမြတ်သော စရဏများပင် ဖြစ်ချေသည်။
ဆန်းဗေဒင်ပညာ၏ လျှို့ဝှက်သော သော့ချက်များ
ဤဆန်းဗေဒင်ပညာတွင် လျှို့ဝှက်ထားအပ်သော ကဏ္ဍများမှာ ကိန်းခန်းပိုင်း၌ . . .
(ခ) ဆန်းကျင်သောဂြိုဟ်ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း
(ဂ) ခွင်လွှဲအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲပုံတို့ကို တတ်သိနားလည်၍ ပိုင်နိုင်စွာ တွက်ချက် တိုင်ထူနိုင်ရမည်။
အယူအဆပိုင်း၌ . . .
(က) မူလဇာတာဂြိုဟ်နေနှင့် ရုပ်ပိုင်းတို့ ဆန်းဝင်ခြင်း၊ ဆန်းကျင်ခြင်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခြင်း
(ခ) ကိန်းအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်စေတတ်သော အကြောင်းနိမိတ်နှင့် အကျိုးအဟောပိုင်း ကောက်ယူပုံ
(ဂ) ကိန်းတို့ကို ဆန်းကျင်၍ ပေါ်ပေါက်သော အကြောင်းနိမိတ်နှင့် ဆန်းဝင်သော အကြောင်းနိမိတ်များ
(ဃ) ကိန်းအလိုကျ စီမံယူရသော အ၀င်အထွက်ယတြာ ဓါတ်ပြုပြင်ပုံများကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ယူဆ သိရှိနိုင် စေရမည်။
ဆန်းဗေဒင်ပညာသည် တရားသေ ကိန်းဘတ်၊ ဂြိုဟ်ဘတ်ပညာ မဟုတ်ပါချေ။ သဘာဝဂြိုဟ်များ၊ ဓါတ်များနှင့် လူသားတို့ ကိုက်ညီလျှင် ဆန်းဝင်သည်ဖြစ်သောကြောင့် အောင်မြင်ပြီးမြောက်ခြင်း၊ လွယ်ကူခြင်း၊ မကိုက်ညီလျှင် ဆန်းကျင်သောကြောင့် ပျက်စီးခြင်း၊ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ခြင်း၊ ခက်ခဲပင်ပန်းခြင်းတို့ကို စီစစ်ခွဲခြား ဟောပြောရသော ပညာပင် ဖြစ်လေသည်။
လူတစ်ဦးသည် ကံအကျိုးပေး လွဲချော်ပျက်ပြားတော့မည့်အခါများတွင် ဆန်းဝင်သော အကြောင်းနိမိတ်များကို မြင်တွေ့လာရတတ်၏။ ဆန်းဝင်သော အကြောင်းအရာများကို နှစ်သက်သဘောကျ၏။
ကံအကျိုးပေး ကောင်းမွန်လွယ်ကူတော့မည့် အခါများတွင် ဆန်းဝင်သော အကြောင်းနိမိတ်များကို မြင်တွေ့ လာရတတ်၏။ ဆန်းဝင်သော အရာများကို နှစ်သက် သဘောကျ၏။
သဘာဝအရှိတရားအတိုင်း ဆန်းကျင်နေသော သူများအား သဘာဝအရှိအတိုင်း ဆန်းဝင်လာအောင် ပြုပြင်စီမံ၍ ယတြာဆင်ရသည်။ ဆန်းဝင်သော အရာများကို ဆောင်၍ ဆန်းကျင်သော အရာများကို ရှောင်ရခြင်းသည် ဆန်းဗေဒင်၏ အရေးကြီးသော အချက်ပင် ဖြစ်လေသည်။
အရာရာကို ဆန်းဥပဒေသဖြင့် (က္ကဌ နှင့် အနိဌ) ခွဲခြားစီစစ်ခြင်း ဟောပြောခြင်းတို့ကို ဆိုလိုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် သရုပ်မှာ . . . ဘိနပ်ကို တွေ့ရ၏။ ဟောရန်ကား . . .
အိမ်ခြေရင်း၊ နိမ့်ကျသော အရပ်မှာ နေသလား . . . (အမေး)
နေလျှင် ဆန်းဝင်၏ အကောင်းကို ဟောရာ၏။
“အိမ်ဦးခန်း၊ ခေါင်းရင်းမှာ နေပါတယ်” ဟု ဖြေလာလျှင် ဆန်းကျင်၏။ အဆိုးကို ဟောရာ၏။ ဤတွင် ဆန်းဝင်သော အဟော (အမေး)နှင့် ဆန်းကျင်သော အဟောများကို ဟောပြောရန် ဖြစ်ပေသည်။ ဘိနပ်ဟူသော အရာကိုတွေ့ရုံဖြင့် အကောင်းအဆိုး ဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုဘဲ ဆန်းဝင်ခြင်း၊ ဆန်းကျင်ခြင်းကို စစ်ဆေး ဟောပြောခြင်းသာ ဖြစ်လေသည်။
ဤဆန်းဗေဒင်ကို ကိန်းဂြိုဟ်များ၏ ဌာန၊ သဘာဝ ပရိယာယ်များကို အရှိတရားအတိုင်း အဟောများသည် ဆန်းဝင်သော အဟောများသာ ဖြစ်သည်။ ဤသို့ မဟုတ်လျှင် ဆန်းကျင်၏။ ဆန်းကျင်၍ ဖြစ်သော အဟောများသည် အပြန်သာ ဖြစ်လေသည်။ သူ့အလိုအလျောက် ဖြစ်ပျက်လာစေတတ်သော အရာများမှာ ကိန်းကို ထောက်ခံသော (၀ါ) ဆန်းဝင်သော “အကြောင်းနိမိတ်များ” သူ့အလိုအလျောက် ပေါ်ပေါက်တတ်၏။ ဤသို့ ပေါ်လာလျှင် ဆန်းဝင်သည့်အတိုင်း “အကျိုးတရား” အဖြစ် ဟောစရာ အချက်များ ပေါ်လာလေသည်။
ဗေဒင်ဟောရာတွင် . . .
(က) ကုလားထိုင် စားပွဲနှင့် မဟောသင့်။ ဗေဒင်မေးသူ၏ ထိုင်ပုံ၊ နေရာယူပုံ ဣဋ္ဌ အနိဋ္ဌ တို့ကို သိရှိရန်နှင့် နိမိတ်အင်္ဂါများကို သိရှိအပ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(ခ) နွားသား၊ ကျွဲသား စားတတ်သူများကို မိမိဟောပြောသည့်နေ့မှစ၍ မစားသောက်ရန် အဓိဋ္ဌာန် ပြုစေရမည်။ (ဓါတ် ယတြာများ ပေးရာတွင် လေးနက်၍ ထိခိုက်စေရန်နှင့် ဇာတာပုံအတိုင်း ပြုပြင်၍ ရမရကို ကြိုတင်စမ်းသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
(ဂ) ဗေဒင်မေးသူအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဖြင့် သူ၏အမှုကိစ္စဟူသမျှကို ကူညီရန် စိတ်ဝင်စားမှု ပြင်းပြစွာဖြင့်သာ ကြံဆဟောပြောရမည်။ သို့မှသာ ဓါတ်ခိုက်သဖြင့် ဟောရာတွင် မှန်ကန်ခြင်း ယတြာဓါတ်များ စွမ်းခြင်းဖြစ်မည်။
(ဃ) အကောင်းအဆိုးကို ဟောပြောရာတွင် နှုတ်ကို စောင့်စည်း၍ “ဖြစ်နိုင်ကိန်းရှိသည်” ဟုသာ ဟောသင့်၏။ နိမိတ်ဘတ်သကဲ့သို့ မိမိနှုတ်မှ တထစ်ချ မဟောပြောရပါ။ ကိန်းအရှိတွင် ဓါတ်ခိုက်၍ တကယ်အဆိုး ဆန်းဝင်လာတတ်သည်။ အဆိုးကို တာဝန်ယူ ကူညီကာကွယ်ပေးသော အားကိုးထိုက်သူ ဆရာသာဖြစ်၏။ “ငါဟောတာ မှန်ရမယ် . . မှန်ရင်ပြီးရော” ဟူသောဆရာသည် မှီခိုအားထားသင့်သော ဆရာမဟုတ်သေး။ ကြေးရရုံသာ အာရုံရှိသူ ဆရာဖြစ်လိမ့်မည်။
(င) ဓါတ်ယတြာပေးရာတွင် အဆိုးကျေပျောက်ရန် ပေးခြင်းမှာ အခါမရွေး ပေးအပ်၏။ အကောင်းအတွက် ယတြာများမှာ ကိန်းခန်းက မည်မျှပင် ကောင်းစေကာမူ မေးသူ၏ ဓါတ်ဖြစ်သော “ဣဋ္ဌ အထိုင်၊ အနိဋ္ဌအထိုင်” သူ၏စကားအသံ “တဘောင်” တို့ကို ကြားနာပြီးမှ စီရင်ပေးရာ၏။
သရုပ် . . .
ရာထူးတိုးကိန်း၊ တိုးတက်ကောင်းစားကိန်းကို မြင်ရသဖြင့် . . “ရာထူး တိုးချင်သလား” “စီးပွားတက်ချင်သလား” စသည် ဆန်းဝင်/မ၀င် စစ်မေးရသေး၏။ “တိုးချင်ပါတယ်ဆရာ” “တက်ချင်ပါတယ်ဆရာ” ဟူသောအဖြေသည် ဆန်းဝင်သော တဘောင်ဓါတ်ပင် ဖြစ်ရာ ဧကန်တိုးတက်နိုင်သူဖြစ်ကြောင်း သိရသဖြင့် ကိန်းအတိုင်း ဆန်းဝင်အောင် ဓါတ်ယတြာကို ပြုပေးရလေသည်။ ဤသို့ မဟုတ်မူ၍ . . .
“တိုးဖို့ မြင်လို့လားဆရာ” “တိုးနိုင်ပါ့မလားဆရာ” “ဘယ်နှယ့်ပြောပါလိမ့်” စသည်ဖြင့် ဆန်းကျင်၍ ဖြေလာလျှင် ဤသူကား တိုးတက်မည့် ဓါတ်ခံ မရှိသောသူဖြစ်သောကြောင့် မည်သည့်ဓါတ်ယတြာနှင့်မျှ တိုးတက်မည်မဟုတ်ကြောင်း သိထားရပေမည်။
ဗေဒင်မေးလာသူသည် သူ့ဓါတ်ကိုသူ မူလပြန်ပြလေ့ရှိ၏။ အဆုံးအဖြတ်ကဏ္ဍများတွင် ထိုအခြင်းအရာတို့ဖြင့်သာ ယူဆဟောပြောနေရပေ၏။ နိမိတ်ကောင်း၊ နိမိတ်ဆိုးများကို အခိုင်အမာပြု၍ ဟောပြောခြင်းသည် ဆန်းဗေဒင်ပညာ၏ အနှစ်သာရပင် ဖြစ်လေသည်။
ကိန်းသည် ဆန်းဝင်ခြင်း၊ ဆန်းကျင်ခြင်းတို့ကို စီစစ်သိရှိရခြင်းနှင့် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တို့ကို ဟောပြောနိုင်၏။
နိမိတ်သည် ကိန်းကို ထောက်ခံသော ကံ၏သင်္ကေတ အဖြစ်သိရှိရာ၏။ ထို့ကြောင့် ကိန်းအတိုင်းကို ဧကံ ဟု မဟောနိုင်ပါ။ ကံ၏ သင်္ကေတအဖြစ် အကြောင်းနိမိတ်ကို တွေ့လာရလျှင် ကိန်းအတိုင်း ဧကံ ဖြစ်လာမည့်အကြောင်း အတတ်ဟောနိုင်လေတော့သည်။
ကိန်းတူသော်လည်း အဟောမတူရပါ။ မတူနိုင်ကြောင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ နိမိတ်မပါလျှင် အဟောမထွက်သော ပညာဖြစ်ရာ ခိုင်လုံတိကျလှပါ၏။ နိမိတ်တို့ကို လေ့လာပါများလျှင် ဆန်းပညာခွင်၌ ပေါက်မြောက်ကျော်ကြားသော ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဆန်းပညာသည် အကြောင်းနှင့် အကျိုးကို ဆက်စပ်ထားသော ရှေးဟောင်း လျှို့ဝှက်ရှားပါးသော လောကီပညာရပ်ကြီးပင် ဖြစ်လေသည်။ သဘောအခြေပိုင်အောင် မပြတ်တွေးကြံနေပါလေ။ ဆိုလိုရင်းကို အရသာရှိရှိ သိနားလည်လာသောအခါမှ ဆရာတစ်ဆူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
လူတစ်ဦး ဘ၀တစ်လျှောက် ကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်များနှင့် ကောင်းစားထိုက်သူ ဟုတ်၏/မဟုတ်၏ ကို အားအနည်းအများ ဝေဖန်ဟောပြောခြင်းသည် မူလအဟောများ ဟောခြင်းပင် ဖြစ်၏။
မူလသဘာဝသည် ကောင်းကျိုးမည်မျှ ပေးမည့်သူ၊ ဆိုးကျိုးမည်မျှ ပေးမည့်သူဟူ၍ ဖော်ပြပြီးသား ဖြစ်လေသည်။ ဤမူလ သဘာဝအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ရပ်တည်ပြီးမှသာ ကာလရှည်၊ ကာလတို ဒသာအပိုင်းအခြားများဖြင့် ဘယ်ပုံကောင်းတော့မည် ဆိုးတော့မည်တို့ကို ဟောရာ၏။
မူလအကျိုးပေး ကောင်းအားနည်းပါးသူ တစ်ဦးကို ကာလအပိုင်းအခြား အဟောတွင် အလွန်တရာ ကောင်းလှသည်ကို တွေ့သော်လည်း အလွန်အမင်း အကျိုးမပေးနိုင်ကြောင်း သိထားရမည်။ ဆိုးကျိုးပေးမည့် ကာလနှင့် ကြုံလျှင်မူ အဆိုးဘက်သို့ ပို၍ အလေးသာကြောင်း သိရပါမည်။
ထို့အတူ မူလအကျိုးပေး အားကောင်းသူ တစ်ဦးအား ဆိုးကျိုးပေးနိုင်သည့် ကာလတွင် အဆိုးအလွန်အကျွံ မဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ ချင့်ချိန်၍ဟောရမည်။
မူလဇာတာပုံနှင့် နာမည်အင်္ဂါဂြိုဟ်များက အိမ်ထောင်ရေး အလွန်ကောင်းကြောင်း ဖော်ပြနေပြီး ရောက်ဆဲ အသက်ပိုင်းတွင် အိမ်ထောင်ရေး ပျက်နိုင်စရာ အချက်များကို တွေ့ရသော်မှ အိမ်ထောင်ပျက်ရမည်ဟု မဟောနိုင်တော့ချေ။
၂။ ရုပ်ဆင်းလက္ခဏာ (ဣဋ္ဌ၊ အနိဋ္ဌ)အား
၃။ နာမည်၏ အင်္ဂါအား
ဤသုံးချက်ကို ပင်မအခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်ဟောပြောရ၏။ ဤသုံးချက်စလုံးတွင် ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ အကျိုးအပြစ်များ ပေါ်လွင်နေကြောင်း သိရမည်။
၁။ ဇာတာရှင်တစ်ဦးသည် မည်သည့် ကာလတွင် ကောင်းအားပိုပြီး မည်သည့် ကာလတွင် ဆိုးအားပိုမည်။ (အဖြစ်အားနှင့် အပျက်အားကို သိရန်)
၂။ မည်သည့်အရာသည် ကောင်း၍ မည်သည့်အရာသည် ဆိုးသည်။
၃။ မည်သည့်အရာသည် အကျိုးပေး၍ မည်သည့်အရာသည် အကျိုးယုတ်သည်။
၄။ မည်သည့်အခါတွင် မည်သည့်နိမိတ်များသည် ကောင်းနိမိတ်များဖြစ်၍ မည်သည့်နိမိတ်များသည် ဆိုးနိမိတ်များ ဖြစ်ကြသည်ကို သိရှိရန်။
၅။ ဆိုင်ရာ ဒသာကာလအတွင်း ဆိုင်ရာနိမိတ်များ မပေါ်သေးဟုဆိုလျှင် မျက်မြင်ကိန်းတွင် လာသောနေ့၊ လာသောအချိန် အဆုံးအဖြတ်ကိုယူ၍ အကောင်းဘက်သို့ လိုက်၍ဟောခြင်း၊ အဆိုးဘက်သို့ လိုက်၍ဟောခြင်း ပြုရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၆။ လောလောဆယ် အရေးကြီးသော အဆုံးအဖြတ်အမေးများကို မေးလာပါက ဦးစွာ အထိုင်ကိုကြည့်ရှုဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ အမေးဆင့်၍ တဘောင်ဓါတ်ကို နားထောင်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်ပေါ်ပေါက်သော ကောင်းဆိုးနိမိတ်များကို ဆင်ခြင်ခြင်း၊ ဒသာကိန်းကွက်အပေါ်တွင် ဆိုင်ရာနံဂြိုဟ်များ၏ အနေအထားအားတို့ကို စစ်ဆေး၍ ဆုံးဖြတ်ပေးရပေသည်။
၇။ ရှေ့ရေးကို ကြိုတင်သိလို၍ မေးမြန်းခဲ့ပါက ကိန်း၏ အားနှင့် ရုပ်ပိုင်းအားတို့ကို တိုင်းဆပြီး အကြံပေး ဟောပြောရသည်။ ဆန်းဝင်ရန် အကြံပေး ဟောပြောခြင်းသာပြု၍ အတတ်အချပ်ဟောပြောမှုကို မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ (နိမိတ်မပါဘဲ အတတ်ဟောနိုင်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဒသာကာလအတွင်း ပစ္စက္ခကျကျသာ နိမိတ်ယူ ဟောပြောရလေသည်။)
ဤဆန်းဗေဒင်ပညာသည် အဟောသက်သက်မျှ ပြီးသော ပညာမဟုတ်ချေ။ လူတို့ အလိုရှိအပ် တောင့်တအပ်သော ဣဋ္ဌ ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ကို ခံစားထိုက်သောသူများအား ရရှိခံစားအောင် စီမံဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် အနိဋ္ဌဆိုင်ရာ ဆိုးကျိုးများကို တွေ့ကြုံနေရပါက ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းသည် ဤပညာ၏ အဘိုးတန်ဆုံး၊ အရေးအပါဆုံး အသဲနှလုံးပင် ဖြစ်တော့သည်။
ကောင်းမည့်အခါကာလအတွင်း ကောင်းဌာနမှ ကောင်းနိမိတ်များပေါ်ပေါက်ရန် ကိန်းအလိုကျ ဓါတ်များဖြင့် ဆန်းဝင်အောင် စီမံဖန်းတီးပေးခြင်းသည်သာ အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိခံစားရကိန်း ဖြစ်ပေသည်။ ဆိုးသည့်ကာလ ဒသာပိုင်းအတွင်း ကောင်းကျိုးများအတွက် ဓါတ်ယတြာ ပြု၍မရချေ။ ထို့အတူ ကိန်းတွင် ခိုက်သော ပျက်သော ဆိုးသော ထွက်သော အရာများကို ကောင်းရန်၊ ၀င်ရန် ဓါတ်ယတြာပြုလုပ်၍ မရချေ။ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဆိုးသောကိန်း၏ ကာလအတွင်း အဆိုးကျေပျောက်ရန်၊ ဖြစ်ပေါ်မလာစေရန်မှာမူ ကာယကံရှင်က တိကျရိုသေစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပါက အဆိုးများလျော့ပါးသွားခြင်း ကျေပျောက်သွားခြင်းတို့ကြောင့် အခါမလပ် စီမံပေးရမည်။
ဤသစ္စာခံဗေဒင်ပညာသင်တန်းအား သင်ကြားပို့ချခဲ့သော ဆရာကြီး မင်းကျော်ဇော်သည်လည်း ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရှားပါးနေပြီဖြစ်သော ဤသင်တန်းမူအား မြန်မာ့ရိုးရာ ပညာရပ်များ မှေးမှိန်မပျောက်ကွယ်သွားစေရန် အတွက်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့ရိုးရာပညာရပ်များအား လေ့လာလိုသော ၀ါသနာရှင်များ အတွက်လည်းကောင်း ဆရာကြီးဦးမောင်မောင်ကြည်(သေသ၀ိဇ္ဇာ) မှစေတနာဖြင့် ပြန်လည် ဖြန့်ဝေ၍ ပညာဒါနပြုပါသည်။
အဆင်ပြေ လွယ်ကူစွာ လေ့လာနိုင်ကြပါစေကြောင်း ရည်ရွယ်လျှက်
Posted by aha at 7:22 AM